नेतागण, देशले के पायो ? हामी नागरिकले के पायौं ? | Online Nepal
राधा पोखरेल / चौध वर्ष भयो देशमा गणतन्त्र आएको । आज ६ वर्ष पूरा भएको छ संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको । तर, नेतागण, देशले के पायो ? हामी नागरिकले के पायौं ?
सरकार बन्ने–भत्कनेको त कुरै नगरौं । यसबीचमा प्राय:तपाईंहरू सबैको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने धोको पूरा भएको हुनुपर्छ । किनकि, सरकार बनाउन र भत्काउन सायद संसारकै च्याम्पियन हुनुहुन्छ तपाईहरू ।
समृद्धि जति आफ्नो भागमा पस्केर हामी जनतालाई गरिबी बाँड्नु भो ! कसरी बाँच्ने हामी गरिब जनता ? बोरामा पैसा बोकेर जाँदा झोला भरी सामान नआउने भइसक्यो । बजारमा श्रम बिक्नै छाडिसक्यो । के गर्नु नेतागण, हजुरहरूको मीठो भाषणले हामी नागरिकको रित्तो भाँडोमा रासन नभरिँदो रहेछ ।नेतागण !
शिखरमा हुनेहरू सधैँ जोखिममा हुन्छन् । शिखर ब्यक्तित्वहरू ब्यक्ति भएर पनि केवल एउटा ब्यक्ति मात्र हुँदैनन् संस्था हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू निकै अनुशासित र आदर्शवान हुनु पर्छ । सिक्ने भनेको ठूलाबाट नै हो । सकारात्मक सोंच र कुशल नेतृत्वले यो देश बन्ने जति सम्भावना छ, नकारात्मक सोच र दुर्बल नेतृत्वले बिग्रने खतरा पनि त्यतिकै छ । सम्हालिनुस् । यो आफूले आफैँलाई सम्हाल्ने समय हो ।
बदलाभावले परिवार,समाज,देश कहिँ पनि शान्ति ल्याउँदैन । बदलाभावको अनिबार्य परिणती हत्या, हिंसा र द्वन्द नै हो । के हामी फेरि अर्को द्वन्द चाहन्छौं ? पक्कै चाहँदैनौं । हामी चाहन्छौं, एकता, शान्ति र समृद्धि । (लेखक पोखरेल नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
राधा पोखरेलसंविधान दिवस